यसरी गर्न सकिन्छ जाडोमा छालाको स्याहार « Drishti News – Nepalese News Portal
यसरी गर्न सकिन्छ जाडोमा छालाको स्याहार
२३ कार्तिक २०७८, मंगलबार 11:50 am
काठमाडौं । जाडो मौसममा मानिसको शरीरका छाला सुक्खा हुने, कपालमा चाया पर्ने, हाँगा फाँट्ने, दरो हुने जस्ता समस्या देखिन्छन् । त्यसैले जाडोमा छाला र कपालको विशेष हेरचाह गर्नुपर्छ।
यो मौसममा वातारण चिसो हुनाले छालामा धेरै समस्या देखिन्छन् । दीर्घकालीन रोगहरू, जस्तैः दाद, चिलाउने, लुतो स्क्याबिज, सोयासिस, विन्टर एक्जिमा देखिन्छन्। त्यस्तै जाडोमा घाममा धेरै समय बस्दा अनुहारमा चाया, पोतो, आँखामा चाउरी रिङ्कल, हात र निधारमा सनप्यान जस्ता समस्या आउँछन् । यी समस्या समाधानका लागि प्रशस्त पानी र झोलिलो पदार्थ पिउन, ड्राई सामग्रीको कम प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ ।
शरीरको स्याहार कसरी गर्ने ?
जाडोमा पूरै शरीरको स्याहार गर्नुपर्छ। हरेक दिन बिहान र बेलुका हात, खुट्टा धोएर मोस्चराइजर लगाउनुपर्छ। नुहाएपछि भने पूरै शरीरमा बडी लोसन अथवा मोस्चराइजर क्रिम लगाउनुपर्छ। जाडोमा घाममा बस्दा घामको किरणले हाम्रो छालालाई असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले कम समय मात्र घाममा बस्नु उचित हुन्छ । घामको किरणले छालालाई असर गर्ने हुँदा सन प्रोटेक्सन क्रिम दिनको तीनपटक लगाउनुपर्छ। सन प्रोटेक्सन क्रिम गर्मी मौसममा मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने हाम्रो मानसिकता नै गलत छ। यो घाममा निस्कनुअघि लगाउने क्रिम हो। त्यसैले जाडोमा यसको धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ।
छालाको सुक्खापन कसरी घटाउने ?
जाडोमा अधिकांशले अल्छी गरी शरीर, बेड–कभर र रुमको सरसफाइ निकै कम गर्ने गर्छन्। सरसफाइको कमीले गर्दा शरीरमा धेरै खालका समस्या देखिन्छन्। साबुनले नुहाउँदा पनि छालालाई सुक्खा बनाउँछ। मोस्चराइजर भएको बडी वासको प्रयोग गर्दा छालालाई सुक्खापनबाट जोगाउँछ।’ शरीरमा वोलिभ वइल, नरिवल तेल, बडी लोसन, मोस्चराजर क्रिमको प्रयोगले छालामा सुक्खापनको कमी आउने गर्छ ।
घाममा तताएको पानी र तेल प्रयोग गर्ने
चिसो मौसममा प्रायःले तातोपानीले नुहाउने गर्छन्। तर, तातोपानीले नुहाउँदा शरीरमा सुक्खापन देखिने गर्छ। चिसोमा उसै त हाम्रो शरीरका छाला सुक्खा देखिन्छन्। झन् तातोपानीले नुहाउँदा छालामा अझ बढी सुक्खापन देखिन्छ। आगोमा तताएको पानीभन्दा पनि घाममा तताएको पानीले नुहाउँदा छालामा सुक्खापन त्यति नदेखिने सौन्दर्यविद् बताउँछन् । यसरी छालालाई सुख्खा हुन नदिन घाँममा तताएको तेलले शरीर मालिस गर्नु पर्छ ।